आजका पत्रपत्रिका : कवाडीलाई शोधपत्र, डेंगु रोक्न सुरक्षाकर्मी ! - NA MediaNA Media आजका पत्रपत्रिका : कवाडीलाई शोधपत्र, डेंगु रोक्न सुरक्षाकर्मी ! - NA Media
आजका पत्रपत्रिका : कवाडीलाई शोधपत्र, डेंगु रोक्न सुरक्षाकर्मी !
यसअघि २०६७ मा चितवनमा फैलिएको डेंगु नियन्त्रण गर्न पनि मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएको थियो । यस वर्ष धरानबाट देखापरेको डेंगु कर्णालीबाहेकका सबै प्रदेशमा फैलिएको छ । यसबाट संक्रमित कम्तीमा ३ को ज्यान गइसकेको छ भने १५०० भन्दा संक्रमित छन् । ‘सच्चिँदै मिडिया काउन्सिल विधेयक’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्णले अर्को खबर पनि छापेको छ । समाचार अनुसार चौतर्फी दबावपछि सरकार लचिलो बनेको छ र केही प्रावधानहरू परिवर्तन गरिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले सडक र सदन तताउने भनेर लिएको निर्णय र नेपाल–चीनबीच जारी सैन्य अभ्यासलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकतापूर्वक आफ्नो पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ । कान्तिपुरले ‘कहाँ छन् ३३०० ?’ शीर्षक दिएर द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्थाबारे राज्यसँग प्रश्न गरेको छ । तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट ३३०० नागरिक बेपत्ता बनाइएका थिए । तर, वर्षौं बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारका सदस्यले थाहा पाउन सकेका छैनन् । कबाडीलाई शोधपत्र बिक्री गरिएकोसम्बन्धी खबरलाई कान्तिपुरले एंकर बनाएर छापेको छ । स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्रमुख महेशकुमार खत्रीले पुस्तकालयमा रहेका मानविकी संकायअन्तर्गत १२ विषयका महत्त्वपूर्ण किताब र शोधपत्र कवाडी व्यवसायीलाई बेचिदिएकाे समाचारमा उल्लेख छ । पुस्तकालयका किताब र विद्यार्थीले बुझाएका शोधपत्र बिक्री गर्न मिल्दैन । गर्नैपरे सम्बन्धित संकाय शिक्षक र विभाग प्रमुखसँग परामर्श गरेर माथिल्लो निकायको स्वीकृतिमा मुचुल्का उठाएर मात्र बिक्री गरिनेपर्ने प्रावधान छ । तर, क्याम्पस प्रमुख खत्रीले १२ क्विन्टल किताब प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ र ४ क्विन्टल शोधपत्र प्रतिकिलो १४ रुपैयाँका दरले कवाडीलाई बिक्री गरेका छन् । कोलकातामा नेपालकै कन्टेनर स्टेशन स्थापना भएको खबरलाई नागरिकले प्राथमिकतापूर्वक छापेको छ । त्यस्तै, कांग्रेस बैठकको निष्कर्ष र नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यासबारे पनि नागरिकले समाचार बनाएको छ । सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा पेट्रोलियम पाइपलाइनको उद्घाटन भदौ २४ मा हुने खबर छापिएको छ भने राजधानीले वीर अस्पतालले सेवा दस्तुर बढाउन लागेको लेखेको छ । हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
‘विमानस्थलमा सामान जफत गर्ने क्रम जारी छ’
बिमस्टेक सैन्य अभ्यासको निर्णय सच्याउन रावलको माग, कांग्रेसले प्रमसँग जवाफ माग्ने
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हिंसा : वानेश्वरमा प्रदर्शनकारीले ३ मन्त्रीका गाडी फुटाए